Meydka Gabdho wada dhashay ayaa laga helay Webiga Hudson ee Mareykanka – XOGMAAL.COM
Sucuudiga Qusulkooda ayaa ku sheegay bayaan uu soo saaray in saraakiisha safaaraddu ay la xiriireen qoyska gabdhahaasi, waxa uuna intaasi ku daray in labada gabdhood ee walaalaha ah ay arday ahaayeen “oo ay u wehel yeelayeen walaalkood oo jooga magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Laamaha ammaanka New York ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano ay ka sameynayaan dhimashada Gabdho walaalo ah oo u dhashay dalka Sucuudiga kuwaas oo todobaadkii hore iyagoo la isku xir xiray maydkooda laga helay Webiga Hudson.
Ciidamada Booliska ayaa xaqiijiyay in Meydkooda la helay Tala Faaric, oo 16-jir ah, iyo Rotana Faaric, oo 22-jir, iyagoo is eegaya si buuxdana u labisan oo wajigooda uusan ka muuqan wax uur ku taallo ah sida la sheegay.
Baarayaasha ayaa sheegaya in ay tahay xilli hore in wax go’aan ah laga gaaro haddii fal dambiyeed uu dhacay ama inay iyaguba isdileen, Gabdhaha ayaa dhawaan waxa ay Mareykanka ka codsadeen magangalyo siyaasadeed in la siiyo.
Sida ay sheegayaan saraakiisha Mareykanka Gabdhaha walaalaha ah ee ilma Faaric iyo hooyadood ayaa Sucuudi Carabiya ka soo guuray 2015-kii markaas oo ay dageen magaalada Fairfax, ee gobolka Virginia waxaana gabdhahaasi lagu yaqaannay inay gurigooda isaga baxsadaan.
Balse baarayaasha ayaa sheegaya inay jahawareer tahay sababta maydkooda looga helay daanta webi 400 km u jira halkii uu qoyskoodu deganaa ee magaalada Fairfax.
Dhageyso: Farmaajo oo fashiliyay ujeedka Maamul Goboleedyada iyo Siyaasiyiinta